Madaxweynaha Mareykanka oo ku dhawaaqay tallaabooyin hor-leh oo ka dhan ah Iiraan. | HalQaran.com
Home Caalamka Madaxweynaha Mareykanka oo ku dhawaaqay tallaabooyin hor-leh oo ka dhan ah Iiraan.
Madaxweynaha Mareykanka oo ku dhawaaqay tallaabooyin hor-leh oo ka dhan ah Iiraan.
Donald Trump oo mar kale u hanjabay Iiraan, Photo Credit: EPA
Washington (Halqaran.com) – Madaxweynaha dalka Mareykanka, Donald Trump ayaa qabtay Shir saxaafadeedkii laga sugaayay saacaddihii ugu dambeeyay, kaddib markii dowladda iiran ay beegsatay Saldhigyadda Mareykanka ee ku yaalla dalka Ciraaq.
Trump ayaa sheegay qof Mareykan ah in uusan wax ku noqonin duqeymihii gantaallada ahaa ee ay Iiraan adeegsatay, taasoo uu sheegay haddii waxyeelado ka dhalan laheyd ay la kulmi laheyd Ciqaab deg deg ah.
Wuxuu sheegay in dowladdiisu ay cunaqabateyno hor leh dul dhigi doono Iiraan, si looga jawaabo tallaabada aargoosiga ah ee ay qaadday xukuumadda Tehran.
Dhinaca kale, Trump ayaa ka dalbaday dalalka Midowga Yurub, Ruushka, iyo Shiinaha inay ka baxaan heshiiskii nuclear-ka ee Iiraan, kaasoo uu dhawaan Mareykanku laalay.
Hase ahaatee madaxweyne Trump ayaan jawaab rasmi ah ka bixinin su’aashii la iswada weydiinayay ee ahayd, “tallaabada xigta ee uu Mareykanku qaadi doono” kadib gantaallada Iiraan ay la beegsatay saldhigyadooda dalka Ciraaq.
Trump' oo ku dhawaaqay tallaabooyin hor-leh oo ka dhan ah Iiraan